News18 Nepal || कोरोनाले ज्यान लिँदै, क्वारेटाइनको बेहाल-जनप्रतिनिधी मालामाल - News18 Nepal
कोरोनाले ज्यान लिँदै, क्वारेटाइनको बेहाल-जनप्रतिनिधी मालामाल
काठमाडौं । कोभिड-१९ ले विश्व नै आक्रान्त बनाईराखेका बेला हाम्रा स्थानीय तहमा के कसरी काम भईरहेको छ, यसपाली प्रत्यक्ष हेर्ने र नियाल्ने मौका मिलिरहेको छ । खासगरी पछिल्ला दिनहरुमा राजविराज नगरपालिका स्थित साई कृष्ण मेडिकल कलेजमा रहेको अस्थायी आइसोलेशन सेन्टरमा भएको चरम लापरवाही देख्दा मन नै समालिनसक्नु भयो ।
घटनामा प्रवेश गर्नुअघि सामान्य कुरा भन्न चाहे । क्वारेन्टाइन भन्नाले कुनै रोगको संक्रमण फैलन सक्ने अवस्थालाई आँकलन गरि उक्त संक्रमित इलाका वा संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिलाई बाह्य सम्पर्कबाट छुटाई तोकिएको स्थान वा घरमा कम्तिमा रोग लागेदेखि रोगले लक्षण देखाउँदा सम्मको अवधिसम्म अलग्गै राख्ने अवस्थालाई जनाउँछ । तर, सप्तरीमा आइसोलेशन सेन्टर भित्र एउटै कोठामा ४० भन्दा बढी कोरोना संक्रमितहरुलाई राखिएको छ ।
नेपाल सरकारद्वारा दिइएको निर्देशनलाई समेत ध्यानमा नराखी नगरपालिकाको प्रमुख शम्भु कुमार यादव र आइसोलेशन सेन्टरको प्रमुख डा. रंजित कुमार झाले त्यस्तो नाजुक अवस्था हुँदा समेत वास्ता गरेको देखिदैन । त्यति मात्र होइन्, क्वारेन्टाइन क्षेत्रमा रहेका शौचालयको अवस्था हेर्ने हो भने पनि बसिसाध्य छैन । शौच गर्ने प्लेट पहेलो पानीले ठ्याम्मै भरिएको छ । शौचालयको छेउछाउमा नाक भाँचिने गरी गन्हाउनु त सामान्य भयो चुक्कुल समेत पाउन मुश्कील छ । यो त प्रतिनिधी घटना मात्र हो, देशका धेरै स्थानमा यस्तो अवस्था नहोला भन्न सकिन्न ।
यसबाट लाग्छ कि यी क्वारेटाइनहरु संक्रमणबाट बचाउन बनाइएका हुन् कि ती भित्र रहेका सबैमा संक्रमण फैलाउन ? बिना कुनै टेस्ट गरि राखिएका ती मध्ये कसैलाई संक्रमण भए, अरुलाई फैलाए को जिम्मेवार ? रोग लागीहाले, उपचारको लागि खै को खटिएका छन् ? मापदण्ड अनुरूप त हरेक क्वारेटाइनमा न्यूनतम एमपिएच/एमडी कम्युनिटी मेडिसिनको सुपरीवेक्षण सहित डिउटीमा मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ परिचालिका, प्यारामेडिकल २४ घण्टा एम्बुलेन्स सेवा हुनुपर्दछ । तर, वास्तविक्तामा त्यहाँ एक नियमित ज्वरो नाप्ने सुविधा पनि छैन ।
देश भित्रै कोरोना रोगीको दिनहुँ ज्यान गइरहेको अवस्थामा हामी अझै लापरबाही गर्ने ? क्वारेन्टाइनमा बस्नु कुनै अपराध गरेर बसे जस्तो होइन, यो हाम्रो परिवार र समाजको रक्षाका निम्ति हाम्रो योगदान हो । न्यूनतम सेवा सुविधा उहाँहरूको अतिरिक्त माग होइन, अधिकार अनि राज्यको न्यूनतम जिम्मेवारी हो । केही स्थानीय प्रतिनिधिहरुले यो न्यूनतम जिम्मेवारी नबुझेको देखिन्छ ।
अनि कम पढ़ेका, कम बुझेका गाउँमा नेता हुँ भनि स्थानीय तहमा जितेका धेरै प्रतिनिधिहरुको अकर्मण्ता यस अवधिमा झल्झलि देखिरहेको छ । अरु बेला ती जनप्रतिनिधिहरु अकर्मण्ताले विकास नहुँदो हो, बदनियतले भ्रष्टचार हुँदो हो । तर, यस महामारीमा उहाँहरुको मूर्खताले धेरैको ज्यान जानेछ । के हामी त्यो सहन तयार छौँ । पक्कै पनि हुनु हुँदैन । सबैले आफ्ना नजिकका जनप्रतिनिधिहरु र प्रशासनलाई प्रश्न गरौँ, खबरदारी गरौँ, अनि आफूले सक्दो सहयोग गरौँ । आशा गरौँ, हाम्रा स्थानीय प्रतिनिधिहरु र प्रशासनले यसमा मध्यनजर गर्दै मापदण्ड अनुरुप क्वारेटाइनहरुको स्तरोन्नति गर्नेछन् ।
नेपालमा ३६ कोरोना संक्रमितको अवस्था सिकिस्त, २ जना भेन्टिलेटरमा